China Light ink jet nyefe akwụkwọ (na-ekpo ọkụ bee) emepụta na suppliers |Alizarin
Budata & Ajụjụ
Ndị ahịa Jikọọ
Akwụkwọ Nyefee Ink Jet
Akwụkwọ Nyefee Ink Jet (Iron-On)
Akwụkwọ Nyefee Ink Jet (tebụl a kpụrụ akpụ)
Akwụkwọ Nfefe Ink Jet buru ibu (okpokoro ịkpụ)
Akwụkwọ Nfefe Laser agba
Eco-Solvent Mgbanwe Mbipụta
Mgbanwe Ọkụkụ Cuttable
Mgbasa ozi inkjet Eco-solvent
Ndị nbipute nkesa ikike
Akwụkwọ mbufe jet ink dị ọkụ ( bee na-ekpo ọkụ)
Koodu ngwaahịa: HT-150R
Aha ngwaahịa: Iron-On InkJet Okpomọkụ Akwụkwọ na-ekpo ọkụ
A4 (210mm X 297mm) - 20 mpempe akwụkwọ / akpa,
A3 (297mm X 420mm) - 20 mpempe akwụkwọ / akpa,
A(8.5''X11'') - 20 mpempe akwụkwọ / akpa,
B (11''X17'') - 20 mpempe akwụkwọ / akpa, 42cm X30M / mpịakọta, nkọwa ndị ọzọ chọrọ.
Ndakọrịta ink: mmiri nkịtị dabere na ink pigmenti
Jụọ online Budata PDF
Enwere ike ịse akwụkwọ mbufe inkjet ọkụ site na wax crayons, pastels mmanụ, ihe nrịbama fluorescent, pensụl agba na ndị na-ebi akwụkwọ inkjet niile, wee bufee ya na akwa akwa na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ọkụ, ngwakọta owu / polyester site na igwe igwe mgbe niile ma ọ bụ igwe ọkụ ọkụ.Icho mma akwa na foto na nkeji.mgbe ịnyefechara, nweta ogologo ogologo oge na agba na-ejigide onyonyo, ịsacha mgbe emechara.
Akwụkwọ mbufe inkjet ọkụ dị mma maka ịhazi T-shirts na-acha ọcha ma ọ bụ ọkụ ọkụ, akwa mkpuchi, akpa onyinye, paịlị òké, foto dị na quilts na ndị ọzọ.
■ Hazie ákwà na foto ọkacha mmasị na eserese.
■ Emebere ya maka nsonaazụ pụtara ìhè na akwa akwa na-acha ọcha ma ọ bụ nke na-acha ọkụ ma ọ bụ akwa akwa / polyester ngwakọta
■ Ọ dị mma maka ịhazi T-shirts, akpa kanvas, aprons, akpa onyinye, paịlị òké, foto dị na quilts wdg.
■ Enwere ike ịpụpụ akwụkwọ azụ azụ n'ụzọ dị mfe na 5 sekọnd ka ebufechara.
∎ Ígwè na-eji ígwè ezinaụlọ eme ihe na igwe na-ebipụta okpomọkụ.
■ Enwere ike ịsacha nke ọma ma debe agba.
4.Ndụmọdụ ndị nbipute
Enwere ike ibipụta ya site na ndị na-ebi akwụkwọ inkjet ọ bụla dị ka: Epson Stylus Photo 1390, R270, R230, PRO 4400, Canon PIXMA ip4300, 5300, 4200, i9950, ix5000, Pro9500, HP De80t Office, HP De80 K550 etc.
na ụfọdụ ndị na-ebi akwụkwọ laser (biko na-anwale tupu ojiji) dịka: Epson Acusaser C525, CBP500, CBC5500, CLC11160, CLC5000, clriv5966660 , 3100, 3200 wdg.
Nhọrọ dị mma: foto (P), Nhọrọ akwụkwọ: Akwụkwọ dị larịị
∎ Kwadebe elu kwụsiri ike, nke na-egbochi okpomọkụ kwesịrị ekwesị maka ịgbanye ígwè.
■ Mee ka ígwè ahụ kpoo ọkụ ruo n'ebe a na-etinye owu, nke a na-atụ aro ka ikpo ọkụ dị 200ºC.
∎ Jiri nwayọ kụọ akwa ahụ ka ọ dị mma nke ukwuu, wee tinye akwụkwọ mbufe n'elu ya ka ihe onyonyo ebipụtara chere ihu ala.
a.Ejila ọrụ uzuoku.
b.Jide n'aka na a na-ebufe ọkụ n'otu n'otu na mpaghara dum.
c.Iron akwụkwọ mbufe, na-etinye nrụgide dị ka o kwere mee.
d.Mgbe ị na-ebugharị ígwè ahụ, ekwesịrị inye obere nrụgide.
e.Echefula akụkụ na akụkụ.
■ Gaa n'ihu na-ete ihe ruo mgbe ị chọpụtachara akụkụ nke ihe oyiyi ahụ kpamkpam.Usoro a niile kwesịrị iwe ihe dịka 60-70 sekọnd maka elu onyonyo 8 "x 10".Na-esote site n'itinye ihe oyiyi ahụ niile ngwa ngwa, kpoo akwụkwọ mbufe ọzọ maka ihe dịka 10-13 sekọnd.
■ Kpochapụ akwụkwọ azụ na-amalite na akuku n'ime sekọnd ise ka usoro nchicha gasịrị.
7.Heat pịa na-ebufe
∎ Ịtọkwa igwe igwe na-ekpo ọkụ 185°C maka 15 ~ 25 sekọnd iji oke nrụgide ma ọ bụ dị elu.pịa kwesịrị emechi emechi.
∎ Jiri nwayọ pịa akwa ahụ 185ºC maka sekọnd ise ka ị hụ na ọ dabara nke ọma.
∎ Tinye akwụkwọ mbufe na ya ka ihe onyonyo ebipụtara chere ihu ala.
■ Pịa igwe 185°C maka 15~25 sekọnd.
■ Kpochapụ akwụkwọ azụ na-amalite na akuku n'ime sekọnd ise ka ebufechara
8. Ntuziaka ịsa:
Saa n'ime ime na mmiri oyi.Ejila bleaCH.Tinye n'ime igwe nkụ ma ọ bụ kwụgidere ka ọ kpọọ nkụ ozugbo.Biko agbatịla ihe onyonyo a bufee ma ọ bụ uwe T-shirt n'ihi na nke a nwere ike ime ka mgbawa na-eme, Ọ bụrụ na mgbawa ma ọ bụ wrinkling emee, biko tinye mpempe akwụkwọ mkpuchi na-acha abụba n'elu mbufe na pịa ikpo ọkụ ma ọ bụ ígwè maka sekọnd ole na ole na-agba mbọ hụ na Pịa ike na mbufe niile ọzọ.Biko cheta ka ị ghara ígwè ozugbo n'elu ihe oyiyi ahụ.
9. Mmecha Aro
Ijikwa & Nchekwa ihe: ọnọdụ iru mmiri dị 35-65% yana na okpomọkụ nke 10-30°C.
Nchekwa nke ngwugwu mepere emepe: Mgbe anaghị eji ngwugwu mgbasa ozi mepere emepe wepụ akwụkwọ mpịakọta ma ọ bụ mpempe akwụkwọ na ngwa nbipute na-ekpuchi akwụkwọ mpịakọta ma ọ bụ mpempe akwụkwọ iji chebe ya pụọ ​​na mmetọ, ọ bụrụ na ị na-echekwa ya na njedebe, jiri nkwụnye njedebe. na teepu ala n'akụkụ iji gbochie mmebi n'akụkụ akwụkwọ mpịakọta ahụ, etinyela ihe dị nkọ ma ọ bụ ihe dị arọ na mpịakọta na-enweghị nchebe ma kpokọtala ha.
Nke gara aga: OEM emeputa Laser Printer Tshirt Nyefee akwụkwọ - Roland Versa STUDIO BN-20 - Alizarin
Osote: PU Flex Eco-Solvent Mbipụta nwere ike ibipụta
Direct subli-ìgwè atụrụ ink jet nyefe akwụkwọ
Akwụkwọ mbufe ụgbọ elu ink gbara ọchịchịrị
Akwụkwọ mbufe ink jet gbara ọchịchịrị
Gwuo ọkụ na akwụkwọ mbufe ụgbọ elu ink gbara ọchịchịrị
Akwụkwọ mbufe ụgbọ elu ink ọla
Akwụkwọ mbufe ink jet na-egbuke egbuke
Nwebiisinka © 2022 Alizarin mkpuchi Co. Ltd |Ikike niile echekwabara